internet shutdowns Archives - WITNESS Blog
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ဖိုင်ဝေမျှခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း	ရေးသားသူ – Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ – Arul Prakkash နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ – ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်းတွင်အကြာရှည်ဆုံးသောအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏အသက်ကို ပြင်းထန်ထိခိုက်သောသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာပေါ်တွင် ရိုင်းပြစွာစော်ကားခြင်းဆင့်၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉တွင် WhatsApp၏ ရက် ၁၂၀ သုံးစွဲသူ မူဝါဒအရ ကက်ရှမီးယား၏ WhatsApp အကောင့်များသည် စတင်၍ ပိတ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ယခုစာရေးသားသောအချိန်၊ဇန်နဝါရီ(၂၀၂၀)တွင်ကက်ရှမီးယားဒေသ၏အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်တရားမဝင်သောအာဏာအလွှဲသုံးစားမှုဖြစ်သည်ဟုအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကန့်သတ်ထားသော မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် ဘရော့ဘင်နှင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို အချို့နေရာများတွင် ပြန်လည်ရရှိသော်လည်း ခွင့်ပြုသောစာရင်း သန့်ရှင်းသောစာရင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းများသည်လူအများအားသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအား ပိတ်ဆို့တားဆီးရန် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပြီး (လူများအား မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် SMS […]	Yvonne Ng	December 13, 2021
ဖုန်းမီဒီယာများကိုအင်တာနက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမပါဘဲbackup အရန်သိမ်းခြင်း	အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အချက်အလက်တွေ မှတ်တမ်းတွေကို အခန့်မသင့်ဖျက်မိတာ၊ ဖျက်ဆီးမိတာ သင့်ဖုန်းသိမ်းဆည်းခံရတဲ့အခါပျောက်တာတွေမဖြစ်အောင်သေချာစေတဲ့နည်းပါ။အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲ့ အချိန်၊နှေးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ခံသိမ်းဆည်းတဲ့အလုပ်ကိုပုံမှန်မလုပ်နိုင်တာတို့သင့်မှတ်တမ်းကို လုံခြုံတဲ့နေရာကိုမပို့နိုင်တာတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဒက်စတော့သို့မဟုတ်လက်တော့ကွန်ပျူတာထဲထည့်ချလိုက်တာလည်းတနည်းအားဖြင့အရန်သိမ်းနည်းတမျိုးဖြစ်သည်သို့သော်လူတိုင်းမှာတော့ရှိမှာမဟုတ်လို့အောက်ပါရွေးချယ်ခွင့်လမ်းများနဲ့ အသုံးဝင်သော အချက်များသည် ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို အင်တာနက်ပိတ်သွားတဲ့အချိန် ကွန်ပျုတာမရှိတဲ့အချိန်မှာ အရန်ခံသိမ်းနည်းတခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။ OTG or wireless thumb drive အသုံးပြုခြင်း OTG or wireless thumb drive များသည် USG drive ဖြစ်ပြီး Andriod (အားလုံးမဟုတ်သော်လည်း) တော်တော်များများနဲ့ compatible ဖြစ်သည်OTG thumb drive ကိုဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ပလပ်ထိုးပြီးဖြစ်စေ OTG-to-USB adapter သုံးပြီးဖြစ်စေ OTG နဲ့ ဆက်ခြင်းဖြင့် drive ကို ဖုန်းကနေ အားသွင်းနိုင်သည်။ ရေပန်းစားသော OTG driveများမှာ Sandisk, Kingston, Samsung […]	Yvonne Ng	December 13, 2021
ခိုင်လုံသောမီဒီယာ အချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	ရေးသားသူ – Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ – Arul Prakkash နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ – ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၊ သုတေသနပြုသူများနှင့် သတင်းထောက်များသည် မျက်မြင်သက်သေများက ရိုက်ကူးထားသော ဦးဆုံးလက်မှတ်တမ်းများကိုအားကိုးပြီးမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်၊ အစီရင်ခံ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို အမည်တပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည်။ ထိုသူများက မှန်ကန်သော အချက်အလက်များပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာအောင် သုံးစွဲသူများသည် အဆင့်များစွာ လုပ်ဆောင်၍ သူတို့ရရှိသော မှတ်တမ်းများကို စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုသည့် ဆောင်ရွက်ချက်သည် အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်။မှတ်တမ်းတင်သူတယောက်အနေဖြင့် အခြားသူများက သင့်မှတ်တမ်းကို အတည်ပြုပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရိုးရှင်းသော အချက်တချို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့မှသာ ထိုမှတ်တမ်းများသည် အချိန်မီ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်။အောက်ပါ အပိုအချက်များသည် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသောကြောင့် […]	Yvonne Ng	December 13, 2021
ဒီမှတ်တမ်းတင် app ကို သုံးသင့်ပါသလား?	ရေးသားသူ – Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ – Arul Prakkash နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ – ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဗီဒီယိုဖမ်းယူရန် မှတ်တမ်းတင်သူများ အသုံးပြုနိုင်သော app များစွာမှာ ဖုန်းထဲတွင်ပါဝင်သော “Camera App” မှ အစ ပိုမိုအထူးပြုထားသော မှတ်တမ်းတင် app များဖြစ်သည့် “ProofMode, Tella, Eyewitness to Atrocities” အထိရှိသည်။ အချို့ app ၏ အဂ်ါရပ်များသည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခွင့်ကို မှီခိုသည့်အတွက် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်သည်ကို သတိချပ်သင့်သည်။ဘယ်တိကျသော app က သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မပြောနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေ၊ လိုအပ်ချက်၊ အန္တရာယ် တွင် မူတည်သည် […]	Yvonne Ng	December 13, 2021
အော့ဖ်လိုင်း(offline) မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် ဖုန်းကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း	ရေးသားသူ – Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ – Arul Prakkash နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ – ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသော်လည်း မှတ်တမ်းတင်သူများအနေနှင့် အရေးကြီးဗီဒီယိုများဖမ်းယူနိုင်ပြီး ထိုဗီဒီယိုအထောက်အထားများကို အော့ဖ်လိုင်း(offline) သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း(online) ပြန်ရသည့်အချိန်တွင် မျှဝေခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။အော့ဖ်လိုင်း(offline)မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်ဖုန်းကိုပြင်ဆင်(setup)ခြင်း အတွက်အသုံးဝင်မည့်အချက်အလက်များကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် အခြားကျင့်သုံးသူများဆီမှ ကျွန်ုပ်တို့ အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာခဲ့သည်။သတိပြုရန်မှာ အချို့သောအချက်များသည် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်မတိုင်မီ သို့မဟုတ် အင်တာနက်ပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံပြောကြားလိုသည်မှာ ထိုအချက်များကို စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေသည့် အချိန်ကျမှ လုပ်ဆောင်ရန်မစောင့်ဆိုင်းပါနှင့်။ ယခုလုပ်ဆောင်ထားပါ။ အကြပ်အတည်း ကျရောက်သည့်အချိန် မတိုင်မီ ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကိုအချိန်ယူ၍လေ့ကျင့်ထားပါ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုတိုးမြှင့်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အချိန်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာသဘောထားထုတ်ဖော်ခွင့်၊စုရုံးခွင့်များကိုကန့်သတ်ထားသည့်အချိန်များနှင့်တိုက်ဆိုင်နေတတ်သည်။သင်သည်မှတ်တမ်းတင်သူဖြစ်လျှင်မိမိကိုယ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊မိမိ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသော်လည်းကောင်းအထူးသတိပြုကာကွယ်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကသင့်ဖုန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခြေအလားအလာ၊ဖုန်းကိုမဖြစ်မနေunlockလုပ်ခိုင်းနိုင်ခြေ၊အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပြခိုင်းသောအခြေအနေများရှိလျှင်(အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်၊အခြား)မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်သီးသန့်ဖုန်းတလုံးသုံးရန်စစဉ်းစားပါ။ထိုသို့သုံးစွဲခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ (contacts, accounts, message, etc) ခိုးယူရရှိခြင်း အခွင့်အလမ်းကို […]	Yvonne Ng	December 13, 2021
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း	ရေးသားသူ – Yvonne Ng ပံ့ပိုးသူ – Arul Prakkash နောက်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ – ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၂၀၁၉ဇွန်လမှစ၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြပ်အတည်းပြဿနာများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာနိုင်ငံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီများ သည် ယင်းတို့၏ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အိမ်နီးချင်း ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်။ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး၏အနှောင့်အယှက်များ’နှင့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများ’ဟူ၍ကိုးကားပြီး လူများ၏အကျိုးအတွက် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ဥပဒေပြဌာန်းသည်ဟု မြန်မာအစိုးရက ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့် လူသန်းပေါင်းများစွာအား မရှိမဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးပြုခွင့်၊လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ “ထိုကဲ့သို့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်းခြင်းများအတွက်စစ်သွေးကြွများကိုပစ်မှတ်ထားစေကာမူ အချိုးအစားမညီမျှသော ဖြတ်တောက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်” ဟု Fortify Rights အဖွဲ့မှ Matthew Smith က ဖော်ပြခဲ့သည်။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအား၂၀၁၉စက်တင်ဘာလတွင်မြို့နယ်၅မြို့နယ်၌တစိတ်တပိုင်းရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ထိုတစ်လတည်းမှာပင်ရိုဟင်ဂျာလူများစုထွက်ပြေးခဲ့သောအိမ်နီးချင်းဘဂ်လားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက3G/4Gservicesများကိုပိတ်ဆို့တားဆီးရန် တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများကို ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် တယ်လီဖုန်း […]	Yvonne Ng	December 9, 2021
Response Tactics to Internet Shutdowns in Latin America	Read the original post in Spanish by Indira Cornelio. Translated by Natalia Guerrero. This blog is part of WITNESS’ global campaign ‘Eyes on Internet Shutdowns: Documenting for Human Rights’. As we facearising number of internet shutdowns across the globe, this post highlights tactics employed by our friends and allies across Latin America. Internet […]	Indira Cornelio	November 23, 2021
Faced with shutdowns: Latin America and the Caribbean continue to broadcast	WITNESS is engaging inaglobal campaign to raise awareness around Internet Shutdowns and to provide practical documentation resources for activists impacted by these issues. Learn more. This post is available in Spanish and Farsi. In just the first five months of 2021, Access Now documented 50 internet blackouts in 21 countries.According to the Jigsaw […]	Indira Cornelio	October 7, 2021
Could There Be an Internet Shutdown in the United States?	What would an internet shutdown look like in the U.S.? In what ways is internet access already being limited? As countries around the world face internet shutdowns, U.S. activists can learn from the strategies being employed within movements to denounce these actions and continue to mobilize in creative ways. Jackie Zammuto	September 27, 2021